FAQ - Ningbo YH umfutholuketshezi Imishini Factory
One Piece nokufaka
Omunye Wire aluka Amapayipi
Amabili Wire aluka Amapayipi
Wire Kuvunguza Amapayipi
Umfutholuketshezi Hose Assembly
Kuyini YH umnikelo?
YH umfutholuketshezi Unikela umugqa olunzulu imikhiqizo wokubacindezela izinga ukuthi kukhona nokufakwa, amapayipi amanzi, ferrules, adapters, imishini, hose yesifunda, kanye neminye imikhiqizo ehlobene. Nathi senza izinkulungwane izinto zokukhiqiza iminyaka eminingi. Sine zokusebenza iqembu lochwepheshe ukuthi uthuthukise imikhiqizo emisha njengoba izimakethe edingekayo. Singanikela OEM insiza amasampula, imidwebo, noma nezidingo eyethulwa. Futhi siphethe amasevisi engcono ezifana impendulo ngokushesha ama-imeyili, okusheshayo imikhiqizo ukulethwa, professional ukuxazulula izinkinga, kangcono ngemva yokuthengisa service, njll
Iyini inqubomgomo isampula?
YH umfutholuketshezi kuyinto friendly futhi esebenzayo ibhizinisi Cooperator. Ukuze nokubambisana lokuqala, siye kwenziwe inqubomgomo isampula ukuthi isebenza kahle ekubhekeni izinga yethu.
Ngaphansi kuka 5pcs for nokufakwa, ferrules, futhi adapters kumahhala ukuba isimo isitokwe.
Ngaphansi kuka 1m ukuze amapayipi amanzi kumahhala ukuba isimo isitokwe.
Ngokuphathelene ukuthumela izindleko, kufanele pre-ikhokhwe, ziveza akhawunti enikeziwe, noma ikhokhwe eceleni kwakho. Uma unenkinga nalo, sizoxoxa.
Uyini eside inkokhelo?
Ngo YH, sinalo emathemini amathathu asetshenziswa edume ukuthi kukhona
1). 100% T / T kusengaphambili
2). 30% T / T kusengaphambili, 70% T / T ingakafiki imithwalo (noma ngokumelene i-invoyisi)
3). L singenakushintshwa / C at emehlweni
Amanye amagama nazo ziyatholakala YH umfutholuketshezi, sicela ukweluleka ngomusa yokuthengisa yethu.
Yiziphi izinto nokufakwa, ferrules futhi adapters?
Nokufaka futhi adapters beze 45 carbon steel
Ferrules beze 20 carbon steel (steel omnene).
Ezinye izinto ezikhona ezifana insimbi engagqwali, nethusi, aluminium, njll Kodwa sicela ukweluleka yokuthengisa lwethu izimfuno zakho ezikhethekile kusengaphambili.
Kanjani imikhiqizo YH ukulawula izinga?
YH ephikelela ekuphishekeleni izinga kangcono iminyaka eminingana emkhakheni wokubacindezela. Kusukela ukuthenga impahla imikhiqizo ukupakisha, sizama ukwenza okungcono. Sisebenzisa nqampuna umhlabeleli materials (45 carbon lensimbi kanye 20 carbon steel) okuyinto abathengwa inkampani olusemthethweni steel. abahloli zethu kokuhlola Ubukhulu ilungelo mayelana kane phakathi CNC womshini. Ngemva zinc kuhlinzwa, imikhiqizo siphelile bazothola uMnyango nokupakisha. abasebenzi Packing uzohlola oda nenani, ukususa Burr ngaphakathi iphakethe ukuze e ibhokisi.
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Amathiphu , Imikhiqizo ezifakiwe, Ibalazwe , Hambayo Site
Carbon Steel umfutholuketshezi nokufaka , Metric Pex Pipe Brass nokufaka , umfutholuketshezi Hose lokulinganisa , Hose Crimping Machine , Fittings Hydraulic, Carbon Steel umfutholuketshezi Hose nokufaka, Zonke Imikhiqizo